I-GARFIELD Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
Igama elithi Garfield lithetha ntoni?
UGarfield uyicingelo ebizwa ngokuba yi-habitational indawo yomntu ovela kwindawo elahlekileyo okanye engaziwayo, ukusuka kwi-Old English gar , echaza "umhlaba onxantathu," kunye ne- feld , esithetha "ilizwe elivulekileyo okanye intsimi."
Eminye imvelaphi eyenzekayo yeGarfield igama liquka iSaxon garwian , elithetha "ukulungiselela," okanye igaraji laseJamani nelaseDatshi , elisentsingiselo esithi "ugqoke, ulungiselelwe" okanye "intsimi okanye indawo enikezelwe umkhosi."
Igama elinguNye igama elithi Spellings: GARFELD, GARFEELD
Uphi igama lomgca weGarfield oluqhelekileyo?
Ngokutsho kweWorldNames PublicProfiler, uGarfield ininzi ifunyenwe e-United Kingdom, inabantu abaninzi abaneenfani ezihlala eNtshona Midlands. E-United States, isibongo seGarfield siqhelekileyo e-Utah, esilandelwa yiVermont, eNew Hampshire, eMonton, eMassachusetts naseNew Mexico.
I-forebears ichaza igama likaGarfield eNgilani njengento exhaphakileyo kwiWorcestershire (igama elingu-55 eliqhelekileyo eligqithisiweyo), lilandelwa nguHuntingdonshire, Northamptonshire naseWarwickshire. EUnited States, iGarfield ininzi kakhulu e-Utah, e-Montana, eVermont, eNew Hampshire, eMassachusetts, eNevada naseMaine. Okuthakazelisayo, isibongo seGarfield sinokuqhelekileyo kwiJamaica naseTaiwan.
Abantu abaPhezulu ngegama leGARFIELD Igama
UJames A. Garfield - umongameli we-20 we-United States
Andrew Garfield - Umdlali waseMerika
UHenry Garfield - igama lokuzalwa lomculi waseMerika kunye nomculi uHenry Rollins
Jason Garfield - juggler; umsunguli we-World Juggling Federation
URichard Garfield - umdali woMdlalo weMidlalo: Ukuqokelela
U-Eugene Garfield - ososayensi waseMerika
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name GARFIELD
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lesiNgesi igama langoku kwesi sikhokelo samahhala kwiintsingiselo kunye nemvelaphi yegama eliqhelekileyo lesiNgesi.
I-Garfield Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto into enjengekhaya laseGarfield okanye ingubo yeengalo kwifayile yeGarfield. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
IGARFIELD Family Genealogy Forum
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwiinzala zikaBarfield ookhokho emhlabeni jikelele. Khangela okanye uphendule kwi-archives ukuze ufumane imilayezo enxulumene nookhokho bakho baseGarfield, okanye ujoyine iqela ukuthumela umbuzo wakho we-Garfield.
Uhlobo loNtsapho - I-GARFIELD Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezu kwe-100,000 ukusuka kwiirekhodi zomlando kunye neenkalo zentsapho ezinxulumene nomgca ezinxulumene nomgca ezihlobene nesigama sikaGarfield kule webhusayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-GARFIELD Igama lomnxeba
Uluhlu lokuposa lwamahhala lunokufumaneka kubaphandi begama leGarfield kunye nokuhluka kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye nolondolozo olugcinweyo lwemiyalezo edlulileyo.
I-GeneaNet - Iirekhodi zeGarfield
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcina, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanegama leGarfield, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
IGenesalog Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye ngegama leGarfield kwi-website yeGenealogy Today.
Inzala kaJames Garfield, uongameli we-20 wase-US
Hlola uhlanga lukaMongameli uGarfield, kuquka nookhokho bakhe, inzala, kunye nohlobo oludumile.
IGENYA - Yithi Igama & Isiqalo
Igama legama lomxholo kunye nemvelaphi
I-KAISER - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali